पत्रकारिताका मियो « Loktantrapost
२९ श्रावण २०७३, शनिबार १०:५४
म पत्रकार होइन, तर म यस क्षेत्रप्रति जिज्ञासा राख्छु । विशेषतः झापाली भएकाले मलाई मेची अञ्चलकै सिङ्गो पत्रकारिताप्रति सदैव खोजी र चासो भइरहन्छ । गएको असार १९ गते बिहान आफ्नो कार्यकक्ष ओमसाई पाथिभरा हस्पिटलको टेबलमा कम्प्युटर खोल्दै थिएँ । एकजना सहकर्मी साथीले भन्यो – ‘अरे दारीवाल पत्रकार त बित्नु भए छ ।’ ‘को’रे’ मैले सोधेँ ? ‘पत्रकार निर्भीक’ – उसले मोबाइलको स्व्रिmनमा फोटो देखाउँदै भन्यो । म टक्क रोकिएँ । र भने – ‘निर्भीक रे, होइन होला !’ हत्तपत्त फेसबुक खोलेँ । पङ्कज नेम्वाङ दाइले समवेदना लेखिसक्नु भएको रहेछ ।
मलाइ ठ्याक्कै त थाहा छैन । तर, करिब २०४५ सालदेखि हुनुपर्छ मैले उहाँलाई चिनेको । डिल्लीराम निर्भीक हिजोआज दैनिकको सम्पादक हुनुहुन्थ्यो । सेतै कपाल, छुस्स दारी पालेको, सधैँ हातमा एउटा डायरी बोकेर हिँड्ने बानी उहाँको थियो । उहाँ बजाज कम्पनीको स्कुटीमा पहिला र पछि हिरो होण्डा स्टिट स्कुटी चढ्नु हुन्थ्यो । त्यसमा चिटिक्क परेको लेडिज हेल्मेट । म कक्षा ५ मा पढ्दा मेरो छिमेकी घरमा विभिन्न दैनिक पत्रिका आउथे । दैनिक हिजोआज पत्रिका हुन्थ्यो, त्यो अक्सर बेलुकीपख आउँथ्यो । मलाई हिजोआज दैनिक पत्रिका हो भनेर त्यो बेलाबाटै थाहा भएको हो । त्यसमा हामीलाई समाचारभन्दा पनि पत्रिकाको देव्रेपट्टी सानो बक्सभित्र लेखिएको गाइँगुइँमा पुग्थ्यो । मलाई गाँइगुँइमा के लेखिएको हो त्यसको अर्थ त्यो समयमा नवुझे पनि पढ्न आनन्द आउँथ्यो । डिल्लीराम निर्भीकलाई देख्नासाथ म गाँइगुँइ सम्झिहाल्थँे । पछि ममा कक्षा आठदेखि १० कक्षासम्म अध्ययन गर्दै जाँदा पत्रकारितामा चासो बढ्यो । स्कूल जाँदा चन्द्रगढीको घुम्ती पसलमा बेच्न राखिएका पत्रपत्रिका हेर्थे । त्यो वेला अक्सर म स्कूल बिदा भएपछि नकुल काजीको झापा एक्सप्रेस, भरत भुर्तेलको आलोक साप्ताहिक, चुडामणि रेग्मीको युगज्ञान साप्ताहिक, तारा बरालको साप्ताहिक विचार, माधव विदोहीको स्वाधीन सम्वाद र डिल्लीराम निर्भीकको हिजोआज नियमित पढ्थेँ ।
पछिल्लो समय झापाका पत्रिका बन्द हुन थाले । नकुल काजीको झापा एक्सप्रेस रोकियो, साप्ताहिक विचार, आलोक, युगज्ञान र स्वाधीन सम्वाद हराए । तर, नकुल काजीले भद्रपुरबाटै लेटर प्रेसबाट विवेचना दैनिक निकाल्न थाल्नु भयो । मलाई लाग्छ, त्यति बेला झापाबाट दुई वटा मात्रै दैनिक पत्रिका हिजोआज र विवेचना प्रकाशित हुन्थे । डिल्लीराम निर्भीकलाई म अङ्कल भन्थेँ, उहाँसँगको यो नाता मेरो आफ्नै श्रृजना हो । शुरुमा यो पत्रिका ४ पानाको आएको याद छ । पछि गएर ४ पाना र अझ पछि गएर १ पानाको मात्र निस्कन थाल्यो । विवेचना ४ पानाको निस्किदा पनि यो १ पानामै आउँथ्यो । तर, हिजोआजको खबरले सबैलाई तताउँथ्यो । हिजोआजमा सम्पादकमा डिल्लीराम निर्भीक भएपनि यसलाई सजाउने काम राजबाबु शंकरले गर्नु हुन्थ्यो । जनताचोकको सिदार्थ छापाखानाको बोर्ड र त्यसभित्र रहेका राजबाबु शंकर र हँसिलो मुहारमा व्यङ्गप्रहार गर्ने पत्रकार निर्भीक मात्रै भेटेको छु । म जाँदा के छ भतिज, केही सहयोग ? पत्रकारले छाप्ने सहयोग गर्छ यसो केही लेखेर ल्याओ न म राजवावुलाई भनिदिन्छु भन्नु हुन्थ्यो । मैले एउटा कविता कोरेँ । करिब २०–२२ हरफको र पत्रिका घरघरमा बाड्न आउने वितरकको हातमा दिएर ‘यो दारीवाल अंकललाई दिनु है’ भने न भन्दै ४ पानाको पत्रिकाको दोस्रो पानामा छापिएछ
मैले चिन्दा डिल्लीराम निर्भीक जोेसँग पनि बोल्नु हुन्थ्यो । उहाँ अलि छुच्चा र लोभी लाग्थ्यो मलाई । चोकचोकमा चिया पसलमा उहाँ आउन साथ अरु साइड लाग्थे । ‘ए वस न हौं कहाँ हिडका’ भन्ने बानी थियो, अनि म भन्थे – ‘डायरी नबोकी आए पो बस्छन् त विचाराहरु ।’
मेची बहुमुखी क्याम्पस अध्ययनको क्रममा मलाई नेवि संघले मुखपत्र हाम्रो आवाज निकाल्ने जिम्मा दियो । मैले वर्ष ४ अंक २१ वाट ७ वर्ष अंक ५७ सम्म त्यो पत्रिकाको सम्पादन गरे । शुरुमै संगठनको मुखपत्र त्यो पनि सम्पादनसहित प्रकाशित गर्नु पर्ने, फेरि प्रतिद्वन्द्वी अनेरास्ववियुको मुखपत्र ‘मेची बोल्छ’सँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने । चुनौती पनि थियो, अव कहाँ र कसलाई सोध्ने ? यसो सोचे नकुल काजी पनि ठुलै पत्रकार जाँउ की क्या हो, चिनेको पनि छैन, पत्रिकामा सम्पादकमा नाम मात्र देख्या हो भनेर गइन । छिमेकमा निर्भीक अङ्कल । हिन्ट्स लिन गए, छापाखानामै केही लेख्दै गरेको भेटे । मैले आफू आएको कारण भनेँ । २–४ वटा हिजोआजका अंक थमाएर यो लैजाउँ हेर र यस्तै ढाँचामा लेख, अरु केही पुस्तक चाहिएमा आउने लाने र फिर्ता गर्ने । भोलिपल्ट मैले हरेक महिनाको पहिलो आइतबार निस्कने गरी मुख पत्र निकाले ,फ्रेम सहित काठको जाली त्यसभित्र मेरो सम्पादनको हाम्रो आवाज । यदि डिल्ली निर्भीकको होसला नपाएका भए म अगाडि बढ्ने थिइँन ।
अध्ययनको क्रममा बीए तेस्रो वर्षमा मैले अतिरिक्त विषय पत्रकारिता रोजे । अब एक जना पत्रकार खोजेर पत्रकारिताको सिकारु अध्ययन गर्नु पर्ने भयो । करिव ७६ जनाको टोलीमा कोही स्वाधीन सम्वादतिर लागे, कोही विवेचनातिर र कोही हिजोआजमा । तर, हिजोआजमा ४–५ जनादेखि कोही भएनन् । ४–५ जनाले ३ दिन जति कक्षा लियौँ, निर्भिक अंकलसँग । उहाँको सिकाउने शैली सरल, व्यङ्गात्मक थियो । तर, बुझाइएमा पर्याप्त थियो । काठमाडौं दौडिरहने बानीले उहाँले सिकाउनु भएन । पछि हामी सबै विवेचनामा नकुल काजीसँग करिब ३५ दिन सिक्न जाँदा हिजोआज बिर्सिन पुग्यौ । फेरि, विवेचनामा मोहन काजी, रोहित काफ्लेको टिममा परेर हिजोआज बिर्सेको हुन सक्छ । पत्रकारिता सिक्ने पहिलो दिन भद्रपुर ब्लड बैङ्कको अगाडिको चौरमा नकुल काजी सरले ल सोलुखुम्वुमा पहिरो गयो त्यसलाई भद्रपुरमा बसेर समाचार लेख त भन्नुभयो, मैले सम्वादाताको शैलीमा लेखे र देखाए, काजी सरले हेर्नु भयो र भन्नु भयो सम्वादता नै हो की के हो ? मैले हैन म त नँया विद्धार्थी हो भने । मेलै त्यसो त हैन सर अस्ती २–२ दिन यसो गाँईगुँईमा सम्पादकले सिकाएका थिए मात्र भन्दा ल ठिक छ भोलिबाट नआए हुन्छ, यतिको सिकाएका राम्रो रहेछन् मेरा दाईले तिमीलाई उहाँले फेरि भन्नु भयो । पत्रकारिता सिक्ने क्रममा एक दिन मैले नकुल काजी सरलाई सोधेँ – ‘सर विवेचनाका नकुल काजी र हिजोआजका निर्भीकमा के फरक छ पत्रकारितामा ?’ उहाँले बढो शालिन शैलीमा भन्नु भयो – ‘दाहाल भाई म के पत्रकार, म त यसो साना कुराहरु सम्प्रेशन गर्ने मात्र हो, वास्तवमा पत्रकार त निर्भीक हुनुहुन्छ । उहाँ मेरा दाई पत्रकार, म उहाँलाई दाई पत्रकार भन्न रुचाउँछु । झापा मात्र नभएर पूर्वमै पत्रकारितामा मियो गाड्ने मान्छे, पत्रकारिताको मियो हुन् डिल्लीराम निर्भीक ।’
एक दिन सगरमाथा चोकमा प्रेस लेखेको स्कुटी अडियो, मैले अभिभावदन गरे । ‘ए, तिम्रो हातमा पनि डायरी ? ल बधाई छ, उहाँले भन्नुभयो । मैले पत्रकारिताको मियोको सिकोँ गरौँ की अङ्कल’ भनेँ । ‘के रे मियो रे ?’ उहाँले सोध्नु भयो, मैले नकुल सरले उहाँको पत्रकार र मियोको बारेमा भनेको कुरा सुनाए । उहाँले हास्दै ‘ए काजीले त मलाई चुलीमै पुर्याएछ’ भन्नु भयो ।
डिल्लीराम निर्भिक झट्ट हेर्दा जो कोहीले पनि झुस्स दारी पालेको, पावरवाला चस्मा बोल्दा हाँसेर बोल्ने भेटेको पाएको छु । आज उहाँ भौतिक संसारमा हुनुहुन्न भन्दा मलाई उहाँको त्यो मुहार, डायरी र रातो स्कुटीको झझल्को आइरहन्छ । आज हिजोआजका सम्पादक हुनुहुन्न । तर, उहाँको हिजोआज मेरो मानसपटलमा भोलिपर्सीसम्म रहन्छ ।